#OromoProtests: BEEKSISA: Waamicha Uggura Geejibaa fi Qoqqobbii Diinagdee Sirna Nafxanyaa Abiy Ahmad Irratti Gaggeessuuf waamame Ilaalchisee Beeksisa Qeerroo Irraa Kenname | OromianEconomist
#OromoProtests: BEEKSISA: Waamicha Uggura Geejibaa fi Qoqqobbii Diinagdee Sirna Nafxanyaa Abiy Ahmad Irratti Gaggeessuuf waamame Ilaalchisee Beeksisa Qeerroo Irraa Kenname	July 30, 2020
BEEKSISA: Waamicha Uggura Geejibaa fi Qoqqobbii Diinagdee Sirna Nafxanyaa Abiy Ahmad Irratti Gaggeessuuf waamame Ilaalchisee Beeksisa Qeerroo Irraa Kenname
Lagannaan ugguraa geejibaa daandii Asphaltti fi Cirraacha/piistaa/ fi qoqqobbiin dinagdee Guutuu oromiyaa tti Adoolessa 27/11/2012 ALH ykn Monday ,AUG 3/8/2020 irraa calqabee Guyyoota Hin murtoofneef hojii irra Ni oola. Haaluma Kanaan toftaa qabsoo bifa lama of keessaa qabu bocuudhaan Qeerroon mata-duree Waamicha Uggura geejibaa fi Qoqqobbii Diinagdee Sirna Nafxanyaa Abiy Ahmad Irratti Gaggeessuuf waamame bifa qinda’een Guutuu oromiyaa tti Ni raawwata.
Akkaataa waamicha kanaatti qoqqobbiin diinagdee mootummaa Nafxanyaa Abiy Ahmed laamshessuuf waamame keessaa muraasni
…..Tooftaan 1ffaan Waamicha Uggura geejibaa fi Qoqqobbii Diinagdee Qeerroon Sirna Nafxanyaa Abiy Ahmadiin loluuf baafate immoo •••->uggura daandiiwwan gurguddoo (highways) irratti xiyyeeffataa. Kaayyoon uggura daandiiwwan gurguddoo kun daandiiwwan Oromiyaa seenanii fi ba’an cufuudhaan ujummoo diinagdee mootummaa Nafxanyaa Finfinnee keessa maadheffatee cufuu dha.Qeerroon addaan qoodame hinjiru, gara duraattis hanga bilisummaa dhugaa galmaan geenyutti hinjiraatu.
••-> uummatni keenya kallattiidhaan ta’e al-kallattiidhaan baankiiwwanii fi inshuraansii mootummaa nafxanyaa kana deeggaran akka itti hin fayyadmne,
•• baankii haaraa amma sheerin isaa gurguramaa jiru akka hin bitne .Uummatni keenya irraa keenya mootummaa nfaxanyaa Abiy Ahmediif gibira akka hin kafalle;
••Jaarmiyaalee tajaajila geejjibaa kanneen sheerii warra diina uummata keenyaan ijaaraman fayyadamuu dhiisuu;
••konkolaataan isaanii Oromiyaa keessa akka hin sochoone ugguruu; ••Miidiyaalee diinaa dadhabsiisuu ilaalchisee miidiyaaleen diinaa fardii uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii labsan kanneen akka EBC, WALTA, ABBAY Media, ESAT, MEREJA tube fi ETHIO Tube, Fana fi kkf uummatni keenya akka hin daawwanne,
••Qabeenya abbootii qabeenyaa kanneen sirna Nafxanyaa kana tajaajilan ummatni Oromoo maqaan beeku qabeenya isaanii hunda irratti tarkaanfiin ugguru akka fudhatamu, qoqqobiin dinagdee akka irratti godhamu.
Waamicha uggura Geejjibaa Guutummaa Oromiyaa ilaalchiseeWaamichi uggura geejjibaa daandiiwwan gurguddoo Oromiyaa seenanii-ba’anii fi Oromiyaa Wiixata, Adoolessa 27, 2012 ALH ykn Monday, AUG 3/8/2020 irraa calqabee akka eegaluuf murtaa’ee jira. Kanaaf, Wiixata, Adoolessa 27, 2012 ALH ykn Monday ,AUG 3/8/2020 irraa eegalee daandiiwwan magaalota Oromiyaa wal agarsiisan marti guyyaa kana irraa kaasee cufaa ta’u. Haaluma Kanaan, daandiiwwan gurguddoo (highways) gara Magaalaa Finfinnee geessan dabalatee geejjibni marti akka dhaabbatu irra deebiin waamicha dhiyeessina. Uggurrii kun Wiixata Adoolessa 27 ALH ykn Monday ,AUG 3/8/2020 irraa egalee hojii irraa akka oolu firaafis ta’e diinaaf ifa haata’u jechuun Qeerroon murteessee jira. Cufiinsa daandiiwwanii kana keessa Ambulaansii irraa kan hafe sochiin geejjibaa Oromiyaa keessa deemuu fi ba’u marti ni dhaabbata.
Sochiin uggura geejjibaa marsaa kanaa daandiiwwan magaalota walquunnamsiisan qofa irratti kan xiyyeeffatu waan ta’eef sochiin taaksii keessoo magaalotaa fi daldalli garagaraa magaalota keessatti adeemsifamu kan itti fufan ta’a. Hariiroon magaalotaa garuu addaan cita. Waamichu uggura geejjibaa guutummaa Oromiyaa kun hamma Qeerroon ibsa baase akka dhaabbatuuf ifatti waamicha dhiyeessutti Guyyoota Hin murtoofneef kan itti fufu ta’a.Warreen murtii Qeerroo fudhachuu didanii socho’uuf yaaluu fedhan Yoo jiraate tarkaanfiin irratti fudhatamu fuula duratti Qeerroo fi qarreen ifa Ni godha.